Olan’ny Fanabeazana Ao Pakistana, Tsy Misy Ilàna Azy Ny Adin’i Balochistan Amin’ny Fanaovana Hosoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2015 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, čeština , English
Mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa Ghatti Dhor. Sary an'i Feroz Jan, fampiasàna nahazoana alàlana.
Nosoratan'i Feroz Jan voalohany tamin'ny teny Urdu ity lahatsoratra ity ho an'ny PakVoices. Navoakan'i Salman Latif tamin'ny teny Anglisy ary naverin'ny Global Voices navoaka noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Nanao fampielezankevitra naherihery setra ihany ny governemantam-paritra tao amin'ny faritany lehibe indrindra ao Pakistan, Balochistan, mba hampiatoana ny fanaovana “hosoka/hala-tàhaka” amin'ny fanadinana any an-tsekoly tato anatin'ny roa volana farany teo. Mba hanairana ny saina, ny departemantan'ny fanabeazana any amin'ny faritany atsimo andrefana dia nampiasa ny teny fanentanana hoe ‘fahafatesan'ny fahalalàna ny fanaovana hosoka, fahafatesan'ny fahamendrehana ny fanaovana hosoka.’
Amin'izao fotoana izao, miatrika olan'ny fanabeazana tsy mbola nisy toa azy i Pakistana. Araka ny ambaran'ny Alif Ailaan, fanentanana iray ho amin'ny fanavaozana ny fanabeazana ao Pakistana, 47% amin'ireo ankizy eo anelanelan'ny 5 sy 16 taona no tsy mandeha an-tsekoly. Ratsy lavitra noho izany ny toe-draharaha ao Balochistan, izay 66% amin'ny ankizy no any ivelan'ny sekoly.
Mpianatra mitazona sorabaventy mivaky hoe: ” Fahafatesan'ny fahalalàna ny fanaovana hosoka.” Sary an'i Feroz Jan.
Nobeazina tao anatin'ny rafi-pampianarana tao Balochistan aho ary zara raha nisy fiovàna hatramin'ny fotoana naha-tao ahy. Mba hijerena raha nahomby ny “fanentanana tsy hanao hosoka”, na hoe tena ilaina, nanapaka hevitra aho ny hitsidika sekoly vitsivitsy tao Gwadar sy ny manodidina azy, izay eo amin'ny 33 % eo ny fidiran'ny ankizy any an-tsekoly, iray amin'ireo avo indrindra ao Balochistan.
Topimaso ny kilasy faha-2 ao amin'ny ambaratonga faharoa Ghatti Dhor. Sary an'i Feroz Jan, fampiasàna nahazoana alàlana.
Tao amin'ny sekoly iray, nanontaniako i Ahmad Baloch, mpianatra iray amin'ny kilasy faha-9, mikasika ilay fanentanana. Ny valinteniny dia hoe, “Mety ho fahafatesan'ny fanabeazana ny fanaovana hosoka, fa raha ny amintsika, fanabeazana inona moa? Rehefa tsy ampianarina antsika akory ny tari-dàlana rehetra momba ny lohahevitra iray, tsy resahantsika ny zara fa nampianarina, inona no hataon'ny mpianatra ankoatry ny manao hosoka, ary manao izay fomba hahafahany (fanadinana)?”
Rehefa naveriko napetraka taminà mpianatra iray hafa ny fanontaniana, namaly i Munawwar Ali hoe , “Tsy manana mpampianatra Fizika izahay, ny fampiasàna 1.2 fotsiny no mba vitanay tao anatin'ny bokin'ny Matematika, nefa ny fanadinana izao efa manakaiky. Tsy misy fomba hafa ho anay ankoatry ny fanaovana hosoka mba ho afaka fanadinana.”
Toa rariny sy mitombina ny alahelon'ireto mpianatra ireto. Rehefa niditra tao aminà sekoly ambaratonga faharoa tao Ghatti Dhor aho, nahita mpianatra mianatra eny ivelan'ny efitrano, eny an-davarangana, mipetraka amin'ny gorodona. Mpianatra dimy ihany no tao an-tsekoly, tsy tonga ny ankamaroany. Ratsy dia ratsy ny trano sekoly.
Manaraka, notsidihako ny sekoly Kapri Muhallah ao Sarbandar, tanàna kely ao akaikin'i Gwadar. Nilaza ny tao an-toerana fa efa ela ny sekoly no nakarina ho amin'ny toeran'ny sekoly ambaratonga faharoa (midika hoe misy kilasy faha-6 sy faha-7 ary faha-8) saingy efitrano roa monja no ananan'ilay trano efa konkan'ny ela. Nolazain'izy ireo ihany koa fa betsaka ny mpampianatra no tsy mamonjy ny toeran-piasàny ao an-tsekoly.
Mpianatra amin'ny kilasy faha-8 ao amin'ny sekoly Kapri Muhallah, Surbanda. Sary an'i Feroz Jan, fampiasàna nahazoana alàlana.
Eo ampijerena ny fahitàna tahaka izany, hitako sarotra ihany ny hahita ny fampiasàna izao fanentanana rehetra izao hiezahana hiatrehana ny fanaovana hosoka amin'ny fanadinana. Raha tsy ny mpianatra aloha no ampianarina voalohany indrindra, raha tsy eo ny fotodrafitrasa entina manabe, ary tsy mamonjy ny asany ny mpampianatra any amin'ny ankamaroan'ny sekoly, inona no ilàna an'io fanentanana io? Fandanindaniam-poana izany.
Mbola lavitra ny hahitàna fahafaham-po amin'ny toe-draharaha misy ny fanabeazana ao Pakistana amin'ny ankapobeny. Ireo fotodrafitrasa mampahonena, ny fisian'ny sekoly matotoa tantanan'ny governemanta (toeram-pianarana tsy misy mpampianatra), ny tsy fahampian'ny fanofànana ireo mpampianatra (ny amkamaroany no tsy manana ny fari-pahaizana takiana) ary ny tena zava-dehibe indrindra, ny tsy fahalavorarian'ny fiantohana ara-bola, izay mazàna no mahatonga ny ray aman-dreny hitsahatra tsy hampiditra ny zanany any an-tsekoly, ireo no olana fototra atrehan'ny ady atao ho fampiakarana ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra.